Nin lagu qabtey baas booryo iyo dhucumentiyo been abuur ah sameyn jirey Adis ababa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Nin lagu qabtey baas booryo iyo dhucumentiyo been abuur ah sameyn jirey...
Nin lagu qabtey baas booryo iyo dhucumentiyo been abuur ah sameyn jirey Adis ababa
Jigjiga, February 27, 2020 (SDM), Nin lagu eedeeyay inuu daabaco oo uu sameeyo dukumantiyo kaladuduwan oo been abuur ah ayaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa.
Taliye kuxigeenka kahortaga dambiyada iyo shilalka gaadiidka ee booliska degmada 6aad ee Addis kiflakatama Taariku Mangasha, ayaa FBC usheegay inay ninkan iyo agabkiisii oo dhan gacanta kusoo dhigeen kadib markay heleen xog shacabku siiyay.
Agabka lagu qabtay ayaa waxaa kamidahaa sida uu taliyuhu sheegay; Mishiin casri ah, Shaabado tirobadan, Baasabooro wadamo kaladuduwan, leesanada dirawaliinta, Shahaadooyinka waxbarashada heerarkeeda kaladuduwan, waraaqaha dhalashada iyo agab kale.
Taliye kuxigeenka ayaa sheegay inay faldambiyeed yada noocan ah ay dhibaato wayn oo dhanka dhaqaalaha, arimaha bulshada ahba kuhayaan dadka iyo dalkaba. Waxaana kow ka ah buu yidhi “shilalka gaadiidka ee marba marka kadambaysa kor usii kacaya ee naf iyo maalba lagu waayo.
Ugudambayn, masuulka ayaa bulshada ugu baaqay inay si wadajir ah dhinac uga soo wada jeedsadaan kahortaga iyo ladagaalanka falalka noocaas ah, si dhowna ula shaqeeyaan hay’adaha amaanka.
Shafici Dahir Muse, Co-founder & managing editor